रामदेवले कडा व्यंग गरेपछि राहुल गान्धीलाई छट्पटी::News from Nepal
रामदेवले कडा व्यंग गरेपछि राहुल गान्धीलाई छट्पटी
भारतमा लोकसभा निर्वाचनमा लज्जासपद पराजय बेहोरेर बसेका भारतीय काग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धिलाई सहानुभुति दिनु पर्ने बेलामा भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले कडा व्यंग प्रहार गरेका छन् । तनावमा रहेका गान्धि तिर इंकित गर्दै रामदेवले मोदीको सिको गर्दै ध्यानमा बस्न आग्रह गरेका छन् । लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जित तथा कांग्रेसको नराम्रो हारपछि भारतीय अर्बपति बाबा रामदेवले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीप्रति व्यंग गरेका छन्। रामदेवले भनेका छन् कि नरेन्द्र मोदीले राहुल गान्धीलाई शीर्षासन गराइदिएका छन् अब हारको समीक्षा गर्नुभन्दा पनि ध्यान र योग गर्नु वेश हुनेछ।
योगगुरु भनेर समेत चर्चित रामदेव सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाका कट्टर समर्थकमात्रै होइन प्रचारक पनि थिए। यो लोकसभा निर्वाचनमा भने उनले मोदीको प्रचार गरेका थिएनन्। उनले मोदीले पहिलो कार्यकालमा २०१४ को निर्वाचनमा गरेका घोषणा पूरा नगरेको भनेर निराशा व्यक्त गरेका थिए। तर, मोदी फेरी सत्तामा आएपछि भने रामदेवले विपक्षी पार्टीका अध्यक्षमाथि व्यंग गरेका हुन्। त्यस्तै, रामदेवले राहुल गान्धीकी बहिनी तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धीको पनि खिल्ली उडाएका छन्। उनले प्रियंका वाराणसीबाट उम्मेदवार नबनेर ठिक गरेको भन्दै चुनावमा उठेको भए राजनीतिक करिअर नै खतम हुने थियो भनेर खिल्ली उडाएका हुन्। वाराणसीबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएका छन्।
जहाँ कांग्रेसले अन्तिम समयसम्म प्रियंकालाई उम्मेदवार बनाउने भनेर चर्चा भएको थियो। कांग्रेसका नेताहरूको खिल्ली उठाउनमा रामदेव यत्तिमै रोकिएका छैनन्। उनले नराम्रोसँग पराजित कांग्रेसका नेताहरूलाई अनुलोम विलोम र कपालभाँति गर्न पनि सल्लाह दिएका छन्। चन्दीगढको एक कार्यक्रमा रामदेवले यस्तो भाषण गरेका हुन्।
बावा रामदेवको व्यंगले राहुल गान्धिलाई राम्रै झटारो पुगेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । व्यंग वाणमा खप्पीस राहुल आफैले कडा व्यंग पाए पछि यसलाई कसरी रियाक्ट गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ । चुनाव अघि निकै चर्को स्वरमा भाषण गर्दै हिँडेका गान्धिको अहिले मत परिणाम सार्वजनिक भए पछि भने बोली बन्द भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई केहि दिनको प्रधानमन्त्री भनेर तिखो टिप्पणी गरेका गान्धि आफैको पार्टी पत्तासाप भए पछि अहिले राहुलको बोली बन्द भएको छ । विरासतको राजनितिक आडमा जातिय राजनिति गर्न खोजेको आरोप उनलाई लागेको छ । भारतको लोकसभा निर्वाचनको परिणामले जातिय राजनिति गर्नेहरुलाई पाखा लगाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानीबारे मुख्यमन्त्री पौडेलको बोली फेरीयो!
किन आए रअ प्रमुख नेपाल ? सरकार परिवर्तनको संकेत !